Myanmar (Birmania) : Ny Barcamp Yangon voalohany · Global Voices teny Malagasy
Myanmar (Birmania) : Ny Barcamp Yangon voalohany
Voadika ny 14 Novambra 2018 2:56 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny sary famantarana ny Barcamp
Fahombiazana lehibe ny Barcamp Yangon 2010 izay natao voalohany tao Myanmar (Birmania) nandritra ny roa andro, niaraka tamin’ny mpandray anjara maherin’ny 2.700 tamin’ity hetsika ity.
Ireo nanatrika nandritra ny lanonana fanokafana
Natao tao amin’ny Info-Tech tamin’ny faha 23 sy faha 24 ny volana Janoary 2010 ny hetsika, faritra iray natokana ho an’ny teknolojia avo lenta ao Yangon (Rangoun amin’ny fiteny Frantsay)
Araka ny planet.com.mm:
Mihoatra ny 3.000 ny isan’ny olona nisoratra anarana nandray anjara tao amin’ny tranonkala. Nolazaina fa anisan’ny fandraisana anjara lehibe indrindra ho an’ny Barcamp nokarakaraina manerantany izany. Nanao ity fanehoan-kevitra ity ny iray tamin’ireo mpandray anjara, fa na dia barcamp nokarakaraina voalohany tao Myanmar aza izany dia maro ireo matihanina sy ireo mpankafy (Habaka) no tonga, izay nahatonga fahombiazana lehibe ho azy ireo.
Nomena teo an-toerana ny fifandraisana amin’ny aterneto Wi-fi mba ahafahan’ireo mpandray anjara mibilaogy, manavao ny pejy Facebook ary mitantara izany mivantana tao amin’ny Twitter.
Fafan’ireo atrikasa natolotra nandritra ny andro voalohany.
Nandray anjara ary nanoratra ny eritreriny ireo bilaogera sasantsasany. Toa an’i Zaw Zaw, izay namoaka ireo sariny ihany koa tao amin’ny Aterneto.
Nanoratra momba ireo andro roa nanaovana ny Barcamp ihany koa i Madyjune, izay nanaovany fandikan-teny an-tsitrapo.
Nandritra ny Barcamp, efitrano miisa enina no natokana ho an’ireo mpandray anjara, ary nanana ora iray izy ireo ho an’ny teny fampidirana sy ny adihevitra. Nandritra ny fizarana voalohany, tao amin’ny efitra laharana voalohany aho nihaino an’i U Ye Myat Thu nanazava ny fomba ahafahana manova ny endriky ny soratra amin’ny fiteny Birmana amin’ny Windows amin’ny endrika unicode, izay tsy mampiova ny endriky ny pejy tany amboalohany sy tsy mampiova ny lahatsoratra tany amboalohany amin’ny teny Anglisy ho teny Birmana. Nandritra ny fanazavana dia tsy maintsy nandeha nankany amin’ny efitrano faha 101 aho (handika teny), izay nisy atrikasa momba ny rakipeo. Efa nandre momba ny rakipeo aho teo aloha, saingy tsy nanandrana ny hanao izany mihitsy, satria noheveriko fa mila ny aterineto haingam-pandeha ambony izany. Nilaza ilay mpanolotra fa ny mampiasa ny rindrambaiko iTune no tsara indrindra. Indrisy anefa fa tsy afaka nametraka rindrambaiko tao amin’ny solosain’ny Cybercafé aho. Raha tsy izany, efa nanandrana izany aho , na dia tsy dia tsara loatra aza ny hafaingam-pandehan’ny fifandraisana amin’ny ankapobeny.
Niditra an-tsehatra nandritra ny Barcamp ny vahiny iray rmlove, ary namoaka lahatsoratra iray momba ny zava-niainany nandritra ny barcamp Yangon izy, sy ny fahitany ny sehatry ny teknolojia vaovao ao Myanmar.
Nisy fotoana, nanontany aho hoe firy ny olona mavitrika mitantana tranonkala na mampiroborobo ny fampiasa amin’ny Aterineto. Olona telo fotsiny no nanangan-tanana. Taorian’izay, nanontany indray aho hoe iza avy no mahafantatra ny XML, ary iray ihany no nanangan-tanana. Tamin’ireo roa ireo no nahitako ny valim-panontaniana miabo tena ambany tokoa. Raha ny hevitro, misy ny antony maromaro mahatonga ny fahasarotana amin’ny fidirana amin’ny teknolojian’ny Habaka ho an’ ny Birmana (farafahakeliny eo amin’ny zava-misy manokana, tsy miresaka ireo mpiasan’ny orinasa na ireo sampan-draharaham-panjakana aho), anisan’izany ny fidirana sarotra sy matetika voasivana amin’ny aterineto, ary ny fahasarotana hita rehefa hanoratra anaran-tsehatra amin’ny Aterineto.
Tao amin’ny fanazavako, nampiasa ohatra vitsivitsy izay nifandraika tamin’ny varotra elektronika aho ( na dia tsy nisy zavatra manokana firy ho an’ny varotra an-tserasera aza tamin’ny fanazavako momba ny SAML). Tsapako avy eo fa tena tsy nety ireo ohatra ireo. Tsy misy varotra elektronika any Birmania. Ary tsy misy ihany koa ny karatra fangalana vola.
Nokarakarain’ny fikambanan’ny matihanina Birmana Myanmar Computer Association sy ireo mpikirakira momba ny sehatry ny teknolojia vaovao eo an-toerana ny Barcamp Yangon.
01 Jolay 2021Azia Atsinanana
CDM, NUG, EAO ary ireo fanafohezana anarana hafa an'ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana ao Myanmar